Blog-Archiv - jornalizem
Liiska Ciyaartoyda Kala Wareegeysa Maanta Oo Ah Maalinta Ugu Danbeysa Suuqa Kala Iibsiga.
Maanta waa maalintii ugu danbeysay suuqa kala iibsiga ee inta badan qaarada yurub, waxaana halkaan idin kugu soo gudbineynaa liiska ugu danbeeya ee ciyaartoyda magaca leh ee maanta la kala iibsaday:
Official: Ciyaaryahankii khadka dhexe ee Liverpool Jay Spearing ayaa si rasmi ah heshiis amaah ah oo hal sanno ah ugu biiray kooxda Bolton.
Update: AC Milan ayaa ku dhawaaqday in Nigel de Jong uu haatan tijaabada caafimaadka u marayo kooxda, ka hor inta uusan qalinka ku duugin heshiiska cusub, isagoo ka soo wareegaya Manchester City.
Official:� Chelsea ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in Thorgan Hazard walaalka ka yar Eden Hazard uu heshiis amaah hal sanno ah ugu biiray kooxda reer Belgium ee SV Zulte Waregem.
Update:� Wakiilka ciyaaryahanka kooxda Tottenham Rafael van der Vaart ayaa u sheegay Sky Sports in ciyaaryahanka uu ku sii jeedo kooxdiisii hore ee Hamburg isagoo tijaabada caafimaadka u mari doona maanta gelinka danbe.
DEG DEG: Kooxaha Schalke iyo Barcelona oo si rasmi ah uga heshiiyay in kooxda Jarmalka ay heshiis hal sanno oo amaah ah ku qaadato Ibrahim Afellay.
Update:� Tababaraha Manchester United Sir Alex Ferguson ayaa sii qasay xaalada Dimitar Berbatov, kaasoo ka baxay heshiisyo uu dhawaan la galay Fiorentina iyo Juventus, isagoo tijaabada caafimaadka u marayay Fulham, lakiin Sir Alex ayaa yiri:
Kooxda Scalke ayaa ku dhawaaqday inay la soo wareegtay ciyaaryahan Ibrahim Afellay oo ay uga soo qaateen kooxda Barcelona heshiis amaah ah oo hal sanno ah.
Kooxda reer Bundesliga ayaa aad u dooneysay inay wax ku soo kordhiso kooxdeeda ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. Wadahadalada ayaa socday shalay oo khamiis aheyd, Afellay ayaana haatan dhameystiray ku biiritaankiisa kooxda Schalke ka dib markii uu saaka maray tijaabada caafimaadka.
Afellay ayaa kaga soo biiray Barcelona kooxda PSV bishii Janaayo 2011, waxaana uu qeyb muhim ah ka qaaday guushii Champions League ee xilli ciyaareedkaas, isagoo caawiye ka ahaa kulankii semi-finalka ee Real Madrid. Si kastaba dhaawac jilibka ah ayaa u diiday inuu ka muuqdo inta badan xilli ciyaareedkii hore.
Falanqeynta Kulanka Xiisaha Iyo Xamaasada Leh Ee Uefa Super Cup Ee Chelsea v Atletico Madrid.
Fernando Torres ayaa ka horimaan doona caawa kooxdii uu ku soo barbaaray ee Atletico Madrid, marka ay caawa Monaco isaga horyimaadaan kooxdii ku guuleysatay Champions League ee Chelsea iyo kooxdii ku guuleysatay Europa League ee Atletico Madrid, iyagoo ku tartamaya koobka Uefa Super Cup.
Kulanka: Chelsea FC v Atletico Madrid
Garoonka: Stade Louis II. – Monaco
Waqtiga: 9:45pm xilliga Soomaaliya
Garsoore:� D. Skomina‎
LINE_UPKA MACQUULKA AH
Mata, Hazard, Bertrand
Juanfran, Miranda, Godin, Filipe Luis
Koke, Turan, Rodriguez
Chelsea ayaa ganaax waxaa kaga maqnaan doona kabtankooda John Terry kaasoo ganaxiisa la dhimay balse seegi doona kulankaan madaama uu casaan qaatay semi-finalkii Champions League ee xilli ciyaareedkii hore. Gary Cahill iyo David Luiz ayaa la filayaa inay ka ciyaari doonaan wadnaha daafaca Chelsea, iyadoo Luiz uu ka soo kabsaday dhaawac madaxa ah oo ka soo gaaray kulankii Newcastle ee Premier League.
Frank Lampard ayaa la filayaa inuu ku soo laabto line-upka kooxda ka dib markii uu kursiga keydka fadhiyay kulankii Newcastle, Raul Mereiles ayaana la filayaa inuu wadada u baneyn doono xiddiga reer England. Eden Hazard ayaa isna lagu wadaa inuu ka garab ciyaari doono Juan Mata iyo Ryan Bertrand, iyagoo caawinaya weeraryahanka kaliya ee afka hore Fernando Torres, kaasoo ka horimaan doono kooxdiisii hore, halka ciyaartoyda cusub Victor Moses iyo Cesar Azpilicueta ay iyagana u badan tahay inay kursiga keydka ku soo bilaaban doonaan.
Ciyaaryahanka mudada dheer maqan Kader ayaa ah dhaawaca kaliya ee uu ka walwalayo Diego Simeone, kaasoo la filayo inuu magacaabi doono line-up la mid ah kii ay kooxdiisa afar iyo waxba ku dubatay kooxda Atletico Bilbao bilowgii isbuucaan.
Thibault Cortois ayaa u banaan inuu ka horyimaado kooxda iska leh ee Chelsea ka dib markii uu amaah kale u saxiixay Ateltico Madrid, halka indhaha intooda badan ay ku sii jeedi doonaan weeraryahanka Radamel Falcao.
Andres Iniesta Oo Ku Guuleystay Abaalmarinta Laacibka Sannadka Qaarada Yurub.
Ciyaaryahan Andres Iniesta ayaa kaga adkaaday Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo abaalmarinta laacibka sannadka qaarada yurub ee UEFA European footballer of The Year.
Ciyaaryahanka reer Spain ayaa ka caawiyay kooxdiisa Barcelona xilli ciyaareedkii hore inay gaarto semi-finalka Champions League, waxaana uu sidoo kale ka caawiyay xulkiisa Spain inay ku guuleystaan koobkii Euro 2012. Waxa uu ka codbatay Messi iyo Ronaldo oo kula tartamayay abaalmarintan, iyadoo ay u codeynayeen joornaaliistayaal ka socda 53da xubnood ee UEFA ay ka kooban tahay.
Messi ayaa ahaa ciyaaryahankii ugu horeeyay ee ku guuleystay abaalmarintaan markii la aas aasay sannadkii hore.
Guusha Iniesta ayaa timid ka dib markii uu halay 19 cod, halka Messi iyo Ronaldo ay heleen min 17 cod, waxaana looga dhawaaqay xafladii Monaco ee lagu qabanayay isku aadka Champions League.
Berbatov Oo Hal Maalin Heshiis La Gaaray Labo Koox Oo Serie A Ah, Ka Dibna Ka Baxay Heshiiskooda.
Ciyaaryahanka weerarka ugu ciyaara Manchester United Dimitar Berbatov ayaa sameeyay shalayto waxyaabo aan inta badan lagu arag suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ka dib markii heshiis uu la gaaray kooxaha Fiorentina iyo Juventus uu aakhirkii ka baxay isagoo doonaya inuu ku biiro Fulham.
Fiorentina ayaa qarka u saarneyd inay ciyaaryahanka reer Bulgria la wareegaan ka dib heshiis shaqsi oo ay la gaareen isaga iyo heshiis ay la gaareen kooxdiisa Manchester United.
Lakiin heshiiskaas inta uusan dhicin waxaa ka afduubatay Juventus oo lacag ka fiican tii Fiorentina u soo bandhigtay, lakiin hadana markii heshiis ay gaareen Juventus iyo Manchester United, Barbatov ayaa dalbaday inuu arko dalabka Juve waxaana uu la gaaray heshiis shaqsi ah, lakiin hadana waxa uu ku wargeliyay inuu doonayo inuu ku biiro Fulham.
Hadaba maxaa laga yiri arintiisa, Fiorentina waxa ay carro kala duldhacday Juventus iyo Berbatov, waxaana warbixin ay soo dhigeen website-kooda lagu yiri:
“Fiorentina waxa ay ku dhawaaqeysaa in heshiiskii Dimitar Berbatov inuu gabi ahaanba burburay ka dib markii aan heshiis la gaarnay Manchester United, islamarkaana aan heshiis afka ah la gaarnay ciyaaryahanka.
“Maanta [shalay] ayaa kooxda Ingariiska ay u ogolaatay inuu ciyaaryahankooda yimaado Florence si uu tijaabada caafimaadka inoogu maro oo uu heshiis u saxiixo.
“Ciyaaryahanka iyo wakiilkiisa waxa ay soo raaceen diyaarad ay tikadhada ka bixisay Fiorentina. Lakiin ma uusan imaan Florence.
“Waxaana ay taasi ku dhacday kooxo kale oo kibir badan, kuwasoo aan aqoonin ciyaar wanaag iyo sharciga Isboortiga, islamarkaana ku xadgudbay cadaalada.
“Markaan ciyaaryahanka u soo laabano, marka laga soo tago dabeecadiisa iyo qiimihiisa garoonka uu ku leeyahay, xilligaan la joogo waan ku faraxsanahay inuusan imaanin Fiorentina. Uma uu qalmo inuu yimaado magaaladeena oo uu xirto maaliyadeena iyo qiimaha ay leedahay.”
Juventus ayaa iyadana dhankeeda ka hadashay sida ay wax u dhaceen, waxaana sharaxaad ka bixiyay agaasimaha guud ee Juventus Giuseppe Marotta.
“Waxyaabahan oo kale waa iska caadi waana ay ka dhacaan suuqa kala iibsiga, gaar ahaan maalmaha ugu danbeeya” ayuu Marotta u sheegay Sky Sport Italia.
“Waxaan kaliya u dhawaanay Manchester United iyo ciyaaryahanka, markii aan ogaanay inuu iska diiday heshiiskii Fiorentina. Waxaa jiray dalab uga yimid Fulham, lakiin waxa uu doonayay inuu qiimeeyo dalabkeeda, islamarkaana jawaab agu soo celiyo caawa [xalay].
“Waxa uu doonayaa inuu sii joogo Premier League. Sababtii uu u aaday Munich? Xaaskiisa ayaa halkaas ka timid.”
Iyadoo haatan la shaaciyay in midkoodna Juve iyo Fiorentina uusan ku biireynin Berbatov, waxaa haatan loo badinayaa inuu u dhaqaaqayo Fulham, lakiin hadana wax walba ayaa suurtagal ah xilligaan la joogo.
Milan Oo Si Rasmi Ah U La Wareegtay Bojan Krkic Iyadoo La Dhowrayo Heshiiskii Hore Ee Barca Iyo Roma.
Kooxda AC Milan ayaa si rasmi ah u la wareegtay weeraryahanka kooxda Roma Bojan Krkic.
Ciyaaryahanka reer Spain ayaa ka tagay kooxda ka dhisan caasimada ka dib hal xilli ciyaareed oo uu la joogay, waxaana uu hal sanno amaah ah ugu biiray AC Milan.
Ciyaaryahankii hore ee Barcelona ayaa shalay ku baasay tijaabada caafimaadka, waxaana maanta loo soo bandhigi doonaa saxaafada, isgaoo noqon doona ciyaaryahankii ugu danbeeyay ee lagu soo kordhiyo kooxda Massimiliano Allegri.
Rossoneri ayaa diiradooda u weeciyay saxiixa 22 jirkaan horaantii isbuucaan ka dib markii ay ku guuldareysteen isku daygoodii ay Kaka kala soo wareegi lahaayeen Real Madrid.
Xilli ciyaareedkii hore Bojan ayaa 33 kulan u saftay Roma, isagoo dhaliyay todobo gool.
Dhinaca kale Barcelona ayaa ku shaacisay website-keeda in u dhaqaaqista Bojan ee San Siro inaysan saameyn ku yeelan doonin heshiiskoodii hore ee ahaa in ciyaaryahanka ay dib u soo iibsan karaan xagaaga soo socda sida ay isku afgarteen Roma.
“Barcelona waxaa lagu soo wargeliyay in Bojan Krkic uu ka tagay AS Roma oo uu ku biiray AC Milan. Ciyaaryahanka waxa uu hal sanno amaah ahaan ugu ciyaari doonaa Rossoneri” ayaa lagu yiri warbixinta ay soo saartay Barca.
“Heshiiska labada kooxood ee Talyaaniga saameyn kuma yeelan doono heshiiskii hore ee dhexmaray AS Roma iyo Barcelona”
Julio Cesar Oo Si Rasmi Ah Ugu Biirey QPR Isagoo U Saxiixay Heshiis 4 Sano Ah
Goolhayaha reer Brazil Julio Cesar ayaa ku biirey kooxda ka dhisan magaalada London ee QPR isagoo u saxiixay heshiis afar sano ah isagoo soo afjaray muddo 7 sano ah oo uu la joogay kooxda Inter.
32-jirkan ayaa ogolaaday in uu la sii joogo kooxda QPR illaa iyo xaggaaga 2016,waxana uu Cesar u soo saftay xulka dalkiisa 64 ciyaar.
Goolhaye Cesar ayaa u sheegay shabakada warbaahinta ee QPR inuu aad ugu faraxsan yahay in uu ku soobiiro kooxda loftus Road.
Guddoomiyaha kooxda QPR Tony Fernandes ayaa rumeysan in la soo wareegida Cesar ay ka caawin karto kooxda uu macalinka u yahay Mark Hughes inay ka sare marto heerka ay haatan ugaga jirto horyaalka Premier League.
Kooxda ayaa kulankii ugu horeeyey ee horyaalka hadda bilowday waxaa 5-0 ugaga badisey kooxda Swansea oo ku soo booqatay garoonkeeda.
Kooxda QPR aya dhowaan waxa ay keensatay goolhaye cusub waxana uu tababaraha kooxda ku tilmaamay ku soo biirida Cesar inay tahay mid xoojineyso dhinaca goolhayaasha kooxda.
Warkan ah in uu Cesar ku biirey QPR ayaa waxaa si aad ah ula yaabay dadka Brazil u dhashay iyagoo aaminsanaa in Cesar uu yahay mid kamid ah goolhayaasha ugu wanaagsan ee soo mara dalka Brazil.